गर्भवतीमा कोरोना संक्रमण - कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
दैलेख — दुल्लु नगरपालिका–६, छिउडीकी २३ वर्षीया गर्भवती महिलामा आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनी ६ दिनअघि भारतको राजस्थानबाट दैलेख पुगेकी थिइन् । क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी उनलाई व्यथा लागेपछि दुल्लु अस्पतालमा लगिएको थियो ।
अस्पतालमा पुर्‍याइएपछि स्वाब संकलन गरिएको दुल्लु अस्पतालकी डा. पुजा विसीले बताइन् । उनका अनुसार अवस्था सामान्य भए पनि उनलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार थालिएको छ । उनी पति र २ वर्षको छोरासहित नेपाल फर्किएकी थिइन् । ‘क्वारेन्टाइनमा हुँदा व्यथाले च्यापेपछि अस्पताल ल्याइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालको क्षेत्र सानो भएकाले सिल गर्ने तयारी गरिएको छ ।’ संक्रमित महिलाको परिवार राजस्थानबाट रुपैडियासम्म रिजर्भ गाडीमा आएको थियो भने नेपालगन्जबाट स्थानीय तहले उद्दार गरी गाउँ पुर्‍याएको हो । डा. विसीले महिलाका पति र बच्चामा पनि संक्रमणको आंशका गरिएको बताइन् ।
क्वारेन्टाइमै जन्मिइन् छोरी
ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी एक महिलाले क्वारेन्टाइमै छोरीलाई जन्म दिएकी छिन् । २ नम्बर वडाको पिपलचौतारास्थित जनता आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकी १९ वर्षीया मिना विकले क्वारेन्टाइनमै बच्चा जन्माएकी हुन् ।
गाउँकै क्वारेन्टाइनमा सुत्केरी व्यथा लागेपछि उनलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लकान्द्रमा पठाइएको थियो । बच्चा जन्मेको २४ घण्टापछि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता गरिएको स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज लक्ष्मी रावतले बताइन् । १२ जनाको परिवार नै घरमा बसेकाले उनलाई क्वारेन्टाएनमा पठाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महिलाको आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्यचौकीका अनुसार बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्य सामान्य छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १८:२६
जेष्ठ १९, २०७७ माधव ढुंगाना
भैरहवा — खेतमा काम गरिरहेको बेला चट्याङ लागेर सोमबार रुपन्देहीमा दुई महिलाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार, लुम्बिनी सांस्कृतिक नागरपालिका २ केवटलियाकी ५५ वर्षीया चयनमती यादव र मायादेवी गाउँपालिका ५ की ५० वर्षीया कमलावती यादवको मृत्यु भएको हो ।
चयनमतीको घरदेखि करिब ५ सय मिटर पर तरकारी बारीमा काम गरिरहेको बेला चट्याङ लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी खड्कबहादुर खत्रीले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १८:१६